Ukuzala Kwamagundane ePrague: Izimbangela Zokuthi Ungabi Nezindlebe Eziqinile | Izinja Zomhlaba
Ungaziphakamisa kanjani izindlebe zegundane lami lasePrague?
ULurdes Sarmiento | | Curiosities
Uma ukhethe ifayela le- igundane elixakile Njengomngane wakho othembekile, kufanele wazi ngokuqinisekile ukuthi akuyona into ejwayelekile ukuthi izindlebe zabo zilenge. Kuyaqondakala-ke ukuthi uyakhathazeka uma ubabona kanjena futhi ufuna ukuthi bathole ukuma kwabo okuhle mpo.
Kulesi sihloko sizokukhombisa izindlela ezahlukahlukene ongenza ngazo ukuthi izindlebe zezinja zakho ziphinde zime noma futhi okokuqala ngqa. Kepha okokuqala, ngena esigabeni sokuqala ukuze ufunde kabanzi mayelana ne- imvelaphi, izici zomzimba, umlingiswa, imfundo, ukunakekelwa kanye nezifo yegundane lakho lasePrague.
1 Umsuka wohlanga lwenja yegundane lasePrague
2 Izimbangela zokuthi kungani igundane lakho lasePrague lingaphakamisi izindlebe zalo
3 Amaqhinga okuphakamisa izindlebe zegundane lakho lasePrague
3.1 Usimende wokunamathisela izinja
3.2 Izithako zokudla
Umsuka wohlanga lwenja yegundane lasePrague
Khumbula ukuthi ukuba ngumnikazi omuhle kuqala kusisekelo sokwaziswa kahle, ngoba ukuze uzinakekele kahle, kufanele siqale sazi kahle. Sikumema ke ukuthi udlule emigqeni yalesi sihloko bese uba umnikazi ohamba phambili emhlabeni.
Njengoba iyinja enezimpande zasendulo zobukhosi, igundane lasePrague lidabuka eBohemia, eCzech Republic. Kwaziswe ngamakhosana, amakhosi namalungu enkantolo ngoba ukutholakala kwayo njengenja engumngane kwakuwuphawu lwesimo.
Mayelana nezici zayo zomzimba singasho ukuthi igundane lasePrague, elaziwa nangokuthi I-Prague buzzard noma i-Pražský krysařík, kungokwesithoyi noma uhlobo oluthile lokuzalwa okuncane noma okushiwo okufanayo, kuyinja ye usayizi omncane.
Isilinganiso esingakalwa ngamasentimitha angama-23 ukubuna futhi isisindo saso esifanelekile singamakhilogremu angu-2.6. Yize bavame ukudideka ne ChihuahuaAwahlobene neze omunye komunye, ngaphandle kokufana okungajwayelekile phakathi kwezimpawu zomzimba (usayizi noma uboya).
Ngokwazi kwakhe, unempilo futhi uyasebenza. Ufuna ukudlala ngaso sonke isikhathi futhi uchichima amandla, isimilo nesibindi. Ukuzijabulisa kwabo ngokweqile nabantu kusho ukuthi bangakha izibopho zomzwelo ezinamandla kakhulu, ikakhulukazi nabaninizo.
Ukuba yinja ehlakaniphe kakhulu, ingasheshe ifunde imiyalo ehlukahlukene, amaqhinga namakhono. Kodwa-ke, kufanele wabele cishe imizuzu eyi-10-15 ngosuku ukuphinda ukuqeqeshwa futhi uvimbele igundane lasePrague ekukhohlweni elivele likufundile. Futhi, ukuze ikwazi ukugeleza amandla ayo aphezulu, kufanele udlale ngayo ngenkuthalo futhi uyikhiphe ukuze uchithe isikhathi eside nsuku zonke.
Ukunakekelwa okufanele kuthathwe ngegundane lasePrague, ngakolunye uhlangothi, kulula. Inhlanzeko kufanele inakekelwe ngokugeza njalo ngenyanga futhi kufanele ibekwe kokubili izikelemu zangaphandle nangaphakathi. Ukuxubha ngebhulashi elithambile nakho kuyanconywa. Njengoba ihlupheka kakhulu emakhazeni (futhi, uma kwenzeka, iyaqhaqhazela) kufanele sibahlalise ebusika ngokudla okuphakeme okusezingeni.
I-Prague buzzard ihlala isikhathi eside, ikwazi ukufinyelela eminyakeni eyi-12 nengu-14 ubudala. Kodwa-ke, le minyaka ingaba ngaphezulu noma ngaphansi ngokuya ngokuthi uyinakekela kahle noma kabi kanjani: ukuhamba njalo, ukudla okunomsoco, ukuhlolwa ngezikhathi ezithile nothando oluningi, yizona zihluthulelo eziyinhloko zokwandisa isikhathi sayo sokuphila.
Ngaphandle kwakho uyabavikela, kunezifo ezithile ezingakuthinta kakhulu kunezinye, ngokobuhlanga babo. Lawa ngamathambo aphukile noma ukususwa kwe-patella. Ngalo mqondo, kuyadingeka ukunakekela umdlalo onzima wezingane ongahle ube sekhaya, ngoba kuyinja ebuthaka futhi engaphuka kalula. Lokhu kuyingxenye yesibopho sakho sokuba ngumnikazi wabantu abadala, ukufundisa izingane zakho ukuba ngabafundisi abahle kusukela zisencane.
Kungani ukhathazeka ngezindlebe zakho?
Okokuqala nokubaluleke kakhulu ngoba kuyadingeka ukunqabela ubukhona besimo esivimbela igundane lasePrague ekuboniseni izindlebe zalo ngokufanele. Ngakolunye uhlangothi, izindlebe ezikhonjiwe azilutho futhi azikho ngaphansi isici esivelele kunazo zonke zalolu hlobo.
Izimbangela zokuthi kungani igundane lakho lasePrague lingaphakamisi izindlebe zalo
Izindlebe ezikhonjisiwe kungenzeka zingabonakali ezinjeni ezingaphansi kwezinyanga ezinhlanu, okungukuthi, ezinjeni ezingakaqedi ngokugcwele ukukhula kwazo. Ngalesi sizathu, nangaphambi kokumemeza esibhakabhakeni, qiniseka ukuthi igundane lakho lasePrague selikhulile ngokwanele.
Kunoma ikuphi, kufanele kucatshangwe ngezinto zofuzo ngoba, kubazali abanezindlebe ezi-floppy, kunethuba elikhulu lezingane ezinezindlebe ze-floppy. Ngokwesinye isandla, hlola ukuthi akanayo yini i-otitis. Lesi simo imvamisa siyimbangela ejwayelekile yokuma kwendlebe okulengayo kulolu hlobo.
Amaqhinga okuphakamisa izindlebe zegundane lakho lasePrague
Ekugcineni, ingxenye oyifunayo kakhulu yale ndatshana isifikile nale obukade uyilindile, yona ezoletha isisombululo obukade usifuna entendeni yesandla sakho. Ungayeki, funda futhi uzothola amaqhinga amabili awusizo kakhulu ukwenza igundane lakho lasePrague liphakamise izindlebe zalo.
IPrague Mouse noma iPrague Buzzard
Usimende wokunamathisela izinja
Ukusetshenziswa kwetape kufanele kuhlale kwenziwa kucatshangelwa impilo nokunethezeka kwenja yakho. Okokuqala, kufanele uthole iteyipu elungele izinja ngokukhethekile futhi lokho akukhiqizi ukungezwani komzimba. Imvamisa isetshenziselwa ukuvikela izinja ezinezinwele ezinde ukuthi zingangcolisi, kepha kulokhu kuyasebenza futhi.
Okwesibili kuyadingeka ukuyibeka kahle. Isigaxa senziwa ngokulingisa ukuma mpo kwezindlebe futhi sibekwe. Iteyipu kufanele ishintshwe kungakapheli isikhathi esingeqile ezinsukwini ezi-5. Qaphela, lapho ukhipha ibhandishi ungakhohlwa ukuhlola ukuthi inja yakho ayilimazanga isikhumba noma izinwele zayo.
Okwesithathu, kufanele ukhumbule ukuthi isikhathi esiphezulu sokusetshenziswa yinyanga eyodwa. Endaweni yesine neyokugcina (kepha akubalulekile kangako), udinga ukubeka phambili impilo yengqondo yenja yakho: uma uphikelela ukubeka okuthile kuyo engakufuni, ungayicindezela kanzima. Kungcono ngezindlebe ze-floppy kunokuzizwa uvalo.
Uma uya kudokotela wezilwane, thatha ithuba lokuthintana naye mayelana nezithako zokudla okunempilo. Imvamisa kuyindlela enhle kulezi zimo, kepha kufanele ngaso sonke isikhathi ziphathwe ngaphansi kweso lochwepheshe. Kungani sithi bangakhonza? Hhayi ngoba ini kwenza izindlebe zenja uqwanga. Ukuntuleka kwayo ngenxa yokungadli kahle kungadala izinkinga ekuphakamiseni izindlebe.
Ngalesi sikhathi uzobe usuthole zombili izici ezijwayelekile kanye nezimo igundane lasePrague elingathwala kanzima, kufaka phakathi inkinga ehlobene nokuphakanyiswa kwezindlebe. Noma kunjalo, Uthole amathiphu athile noma izeluleko zokukusiza uzibeke endaweni yazo emi mpo.
Uma uzama noma yimaphi amaqhinga esisanda kukufundisa wona, ngokuqinisekile uzobona izindlebe zegundane lakho lasePrague likhazimula phezulu. Ungavumeli omunye umzuzu udlule ngaphandle kokuzama! Kodwa-ke, hlala ukhumbula lezi zinsika ezimbili: impilo yenja yakho iza kuqala (ngaphambi kwanoma iyiphi indinganiso yobuhle noma ipharamitha) futhi ngaso sonke isikhathi funa isinqumo sakho sokugcina esizovunyelwa ngungoti ochwepheshe.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Ungaziphakamisa kanjani izindlebe zegundane lami lasePrague?
Imininingwane emihle kakhulu. Inhlalakahle yomngane wethu we-canine ibaluleke kakhulu futhi akufanele inganakwa, yingakho emasontweni ambalwa edlule ngiqale umsebenzi wokufuna indlela yokwenza ngcono ikhwalithi yempilo nenhlalakahle yenja yami, futhi Ngithole lolu lwazi oluhle engibone ngalo ukuthuthuka ku-
Ungayiqeqesha kanjani iYorkshire enolaka
Amagama ezinja ezimhlophe zesilisa nezesifazane